Umxhasi woXinzelelo lwaMandla Isikhokelo somsebenzisi-Iincwadana +
Umququzeleli woXinzelelo lwaMandla Umsebenzisi wencwadi XL
Oktobha 2, 2020 Oktobha 2, 2020
18 Comments Kwincwadi yoMsebenzisi yoXinzelelo lwaMandla yoXinzelelo lwaMandla
Ikhaya » amandla » Umququzeleli woXinzelelo lwaMandla Umsebenzisi wencwadi XL
Ukupheka koXinzelelo lwaMandla XL
Umzekelo: Umzekelo # PPC770
KUBALULEKILE: Sukuyisebenzisa le Cooker Cooker de Ufunde le ncwadana iphelele. Ulwazi lwewaranti ngaphakathi.
Umalunga nokufumanisa ukuba uninzi lwabathandi bokutya baziwa ntoni iminyaka. Ngokulula, oko kutya kulungiselelwe ngokufanelekileyo kunye nendlela yoxinzelelo yokupheka kungcamla ngcono kwaye kupheke ngokukhawuleza kunokutya okulungiselelwe kusetyenziswa iindlela eziqhelekileyo zesitofu
Kumashumi eminyaka, icandelo lethu loyilo lokupheka lenze ezinye zezona zixhobo ziluncedo kwaye zaziwayo zasekhitshini zokusetyenziswa kwihlabathi liphela. I-Power Pressure Cooker XL ™ yeyokugqibela kumgca wethu owahlukileyo.
Sivavanye kwaye sagqibezela indibaniselwano efanelekileyo yesinyithi, umphezulu wokupheka
kunye netekhnoloji yedijithali eqinisekisiweyo yokukunceda ufumane ixesha lokutya usapho luphela. Nje ukuba uqhelene nenkqubo yokumisela kwangaphambili, "uya kuyichukumisa kube kanye" uya kufumanisa ukuba uninzi lweendlela zokupheka zosapho ozithandayo zinokupheka ngokugqibeleleyo kwiqhezu lexesha.
Igumbi lokupheka elitywiniweyo lakha ubushushu kunye noxinzelelo. Iziphumo… incasa engakumbi ihlala itshixiwe ngaphakathi ekutyeni kwaye amandla amancinci ayamoshwa ngexesha elifutshane lokupheka. Inkqubo yokupheka "etywiniweyo" isusa ukuchitheka kwesitovu esibi xa "ubambisa" ubushushu, usenzela amakhitshi apholileyo kunye nokucoca okulula.
IPower Pressure Cooker XL ™ izakukubonelela ngeminyaka emininzi yokutya okumnandi kosapho kunye neenkumbulo ezikufutshane netafile yesidlo sangokuhlwa… kodwa ngaphambi kokuba uqale kubaluleke kakhulu ukuba uyifunde yonke le ncwadana ukuze uqiniseke ukuba uqhelene ngokupheleleyo nokusebenza kwayo kunye nezikhuselo.
Xa usebenzisa izixhobo zombane, amanyathelo okhuseleko asisiseko kufuneka alandelwe rhoqo kubandakanya oku kulandelayo:
Funda kwaye ulandele yonke imiyalelo ngononophelo.
Esi sixhobo asenzelwanga ukuba sisetyenziswe ngabantu abanesakhono esinciphileyo somzimba, semvakalelo okanye sengqondo, okanye abanamava nolwazi, ngaphandle kokuba baphantsi kweliso lomntu onoxanduva okanye banikwe imiyalelo efanelekileyo yokusebenzisa isixhobo. Esi sixhobo senzelwe ukuba singasetyenziswa ngabantwana.
Ngalo lonke ixesha qiniseka ukuba ivelufa yokudada ivuliwe ngokuchanekileyo ngaphambi kokusetyenziswa. Indibano engachanekanga inokuthintela umpheki ekwakheni uxinzelelo okanye avumele umphunga uphume emacaleni esimbozo (Jonga iphepha lesi-7 lendibano).
Sukuchukumisa iindawo ezishushu. Sebenzisa izibambo okanye amaqhina.
Ukuzikhusela xa uhlaselwa ngumbane sukuntywilisela okanye uhlambe iintambo okanye iiplagi emanzini okanye kolunye ulwelo.
Esi sixhobo akufuneki sisetyenziswe ngabantwana kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo xa iyunithi isetyenziswa phambi kwabo.
Kukhuphe iplagi xa ingasetyenziswa kwaye ngaphambi kokucoca. Vumela ukupholisa ngaphambi kokubeka okanye ukukhupha iinxalenye.
Sukusebenzisa nasiphi na isixhobo ngentambo eyonakeleyo okanye iplagi okanye emva kwesixhobo esingasebenzi kakuhle okanye sonakele nangayiphi na indlela. Buyisela isixhobo kwindawo ekufutshane egunyazisiweyo ukulungiselela uviwo, ukulungiswa okanye ukulungiswa.
Sukusebenzisa iziqhoboshelo okanye izixhobo ezingacetyiswanga okanye ezinganikwanga ngumvelisi. Ukusetyenziswa kwezincamathiselo ezingacetyiswanga ukuba zisetyenziswe ngumenzi kunokubangela iimeko ezinobungozi ezibandakanya ukwenzakala komntu.
Musa ukuvumela intambo ukuba ijinga ngaphaya komphetho wetafile okanye ekhawuntareni, okanye uchukumise umphezulu oshushu.
Musa ukubeka kufutshane negesi eshushu okanye isitshisi sombane, okanye kwi-oveni eshushu.
Ukulumkisa okugqithisileyo kufuneka kusetyenziswe xa kususwa isixhobo esineoyile eshushu okanye ezinye iziselo ezishushu.
Soloko unamathisela iplagi kwisixhobo kuqala, emva koko ufake intambo kuphuma eludongeni. Ukucinywa, cwangcisa naluphi na ulawulo kwi "Cima", emva koko ususe iplagi kwindawo eseludongeni.
Sukusebenzisa isixhobo sayo nayiphi na into engeyiyo eyayo.
Esi sixhobo sipheka phantsi koxinzelelo. Ukusetyenziswa gwenxa kunokubangela ukwenzakala kwesikali. Yenza iyunithi ethile ivalwe ngokufanelekileyo ngaphambi kokusebenza. Jonga imiyalelo yokuSebenzisa.
Ungaze ugcwalise iyunithi ngaphezulu kwe-MAX LINE kwiPoti yangaphakathi (Umzekeliso2, iphepha 4). Xa usebenzisa ukutya okwandayo ngexesha lokupheka iirayisi okanye iimbotyi ezomisiweyo, landela iresiphi "yokupheka uxinzelelo" kwezi mveliso, kwaye njengomthetho wesithupha, musa ukugcwalisa iyunithi ngaphezulu kwendawo "yesiqingatha". Ukugcwalisa ngaphezulu kunokubangela ukuvaleka, ukuvumela uxinzelelo olungaphezulu ukuba lukhule. Jonga imiyalelo yokuSebenzisa.
Yazi ukuba ukutya okuthile, njengeapilesauce, iicranberries, iperley barley, ioatmeal okanye ezinye iisiriyeli, ukwahlula ii-ertyisi, i-noodles, i-macaroni, i-rhubarb, kunye ne-spaghetti, zinokukhupha amagwebu, amagwebu, isikhohlela, kunye nokuvala isixhobo soxinzelelo (umphunga womoya). Iiresiphi ezisebenzisa ezi zinto mazilandelwe ngononophelo ukuthintela iingxaki.
Ngalo lonke ixesha jonga izixhobo zokukhululwa koxinzelelo phambi kokusebenzisa.
Sukuyivula iPower Pressure Cooker XL de iyunithi ipholile kwaye lonke uxinzelelo lwangaphakathi lukhutshiwe. Ukuba iyunithi kunzima ukuyivula, oku kubonisa ukuba umpheki usaxinezelekile- sukuyinyanzela ukuba ivulwe. Naluphi na uxinzelelo kumpheki lunokuba yingozi. Jonga imiyalelo yokuSebenzisa.
Sukusebenzisa lo mpheki woxinzelelo xa ucoceka ngeoyile.
Esi sixhobo siyilelwe ukuba sisetyenziswe kunye ne-prong e-3, eyakhiwe, i-120V yombane kuphela. Sukusebenzisa nasiphi na isixhobo esivelisa umbane.
I-Power Pressure Cooker XL ivelisa ubushushu obukhulu kunye nomphunga ekusebenzeni kwayo. Zonke izilumkiso eziyimfuneko kufuneka zithathwe ukuthintela umlilo, ukutsha kunye nokunye ukwenzakala komntu ngexesha lokusebenza.
Xa isebenza i-Power Pressure Cooker XL ifuna indawo yomoya kuwo onke amacala kubandakanya phezulu nasezantsi. Ungaze usebenze iyunithi kufutshane naziphi na izinto ezinokutsha ezinje ngetawuli zesitya, iitawuli zamaphepha, amakhethini, iipleyiti zephepha, njl.
Soloko ufaka intambo yombane ngokuthe ngqo kwindawo yokuphuma eludongeni. Ungaze usebenzise le yunithi ngentambo yolwandiso lwalo naluphi na uhlobo.
Nabani na ongakhange ayifunde ngokupheleleyo kwaye angaqondi yonke imiyalelo yokusebenza kunye nokhuseleko equlethwe kule ncwadana akafanelekanga ukuba asebenze okanye acoce esi sixhobo.
Ukuba le yunithi iyawa okanye ngengozi iyabhaptizwa emanzini, yikhulule iphuma eludongeni kwangoko. Musa ukufikelela emanzini!
Sukusebenzisa esi sixhobo kwindawo engazinzanga.
Ukuba esi sixhobo siqala ukungasebenzi kakuhle ngexesha lokusetyenziswa, khawuleza ukhulule intambo. Sukusebenzisa okanye uzame ukulungisa isixhobo esingasebenzi kakuhle!
NGAPHANDLE KWENKQUBO YOKUVULA iXower Power Cooker XL. Ukuba ufuna ukuvula iPower Pressure Cooker XL, cinezela iqhosha elithi “KEEP WARM / CANCEL” kwaye usebenzise izibambo okanye isixhobo sekhitshi ujikeleze ngononophelo iValve yoXinzelelo kwindawo evulekileyo (umkhiwane 4, iphepha 4) ukukhupha uxinzelelo lokwakha ngokupheleleyo ngaphakathi kumpheki. Qiniseka ukuba wonke umphunga uphelile kumpheki. Ngenisa ngononophelo isiphatho ngokwewotshi ukuvula. Ngalo lonke ixesha vula isiciko kude kuwe ukuthintela ukudibana nolusu nabuphi na ubushushu obushiyekileyo okanye umphunga.
ISILUMKISO: UKUNCIPHA UMNGCIPHEKO WONYAKA WOMBANE, PHEKA KUPHELA KWISITETE ESINOKUSUSEKA Musa ukuntywilisela izindlu okanye isiseko emanzini. Phambi kokusetyenziswa, coca umphantsi wePoto yangaphakathi kunye nomphezulu wepleyiti yesifudumezi… faka iPoto yangaphakathi, uyijike kancinci ngokwewotshi nangaphambi kwewotshi de uqiniseke ukuba ihleli ngokuchanekileyo kwipleyiti yesifudumezi. Ukusilela ukwenza njalo kuya kuthintela ukusebenza okufanelekileyo kwaye kunokubangela ukonakala kweyunithi.
ISILUMKISO IINDAWO EZITHILE. Esi sixhobo sivelisa ubushushu kunye nokubaleka umphunga ngexesha lokusetyenziswa. Kufuneka kuthathwe amanyathelo afanelekileyo okuthintela ingozi yokwenzakala komntu, imililo kunye nokonakaliswa kwepropathi.
GCINA LE MIYALELO - YOKUSETYENZISWA YINDLU KUPHELA.
Intambo emfutshane yokubonelela ngombane inikezelwa ukunciphisa umngcipheko ngenxa yokurhintyelwa okanye ukukhubeka ngentambo ende. Sukusebenzisa intambo yolwandiso ngale mveliso.
Ukuba isekethe yombane igcwele kakhulu nezinye izixhobo, isixhobo sakho sisenokungasebenzi kakuhle. Kufuneka iqhutywe kwisekethe yombane.
PHAWULA: Le mveliso kufuneka ibekwe emhlabeni. Ukuba kufuneka ingasebenzi kakuhle okanye iphule, ukuthoba isiseko kunika umendo wokunganyangeki kombane ukunciphisa umngcipheko wokothuka kombane. Le mveliso ixhotyiswe ngentambo enezixhobo zokuhambisa umhlaba kunye neplagi yokomisa umhlaba. Iplagi kufuneka ifakwe kwiplagi efanelekileyo efakwe ngokufanelekileyo kwaye ibekwe ngokuhambelana nazo zonke iikhowudi kunye nemimiselo yendawo.
Gcina lo myalelo ukuze usetyenziselwe indlu kuphela
Umboniso wedijithali kwi-Power Pressure Cooker XL yakho unika uluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo kubandakanya ukupheka ngesantya esiphantsi, ukuSela, ukuSingisa kunye nokunye okuninzi.
Ixesha lokupheka kunye namanqanaba oxinzelelo anokuhlengahlengiswa ukuze alungele nayiphi na iresiphi okanye ukhetho lomntu. Ekugqityweni komjikelo wokupheka, iyunithi iya kutshintshela ngokuzenzekelayo kwimowudi ye-KEEP WARM.
Ukupheka ngoxinzelelo lwedijithali kusebenzisa amaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-248O F (120O C) ukudala imeko engenabungozi kwaye esempilweni xa kuthelekiswa neendlela zokupheka zesiko.
Inqaku loXinzelelo loXinzelelo likuvumela ukuba wehlise uxinzelelo ngokukhawuleza nangokugqibeleleyo. Ukwenza njalo, ujikeleze ngononophelo iValve yoXinzelelo kwindawo yeVent usebenzisa i-tongs okanye esinye isixhobo sekhitshi. Ungaze usebenzise izandla ezingenanto.
UKUQELA: Ngexesha lale nkqubo khusela ulusu lwakho nakoluphi na unxibelelwano nomphunga osindayo.
Imowudi ye-STEAM ifudumeza ulwelo lokupheka kwiPoti yangaphakathi ukubilisa kwimizuzu nje embalwa, yokupheka kunye nokupheka ukutya okungapheliyo.
Imowudi ye-KEEP WARM ibamba kwaye igcina ukutya okuphekiweyo kushushu ixesha elide. Ukutya kugcinwa kwimowudi ye-WARM YOKUSHISA ngamaxesha angaphaya kweeyure ezi-4 kunokulahla incasa elungileyo kunye nokuthungwa.
Iimpawu zoKhuseleko ezakhelwe-ngaphakathi
Isixhobo soKhuseleko lweLid: Ithintela ukwakhiwa koxinzelelo ukuba isiciko asivalekanga kakuhle kwaye sithintela isiciko ekuvulekeni de kuphume lonke uxinzelelo.
Uxinzelelo kunye noLawulo lobushushu woluvo: Gcina nkqu ubushushu kunye noxinzelelo ngokwenza ngokuzenzekelayo okanye ukucima umbane.
I-Valve yokuKhusela uKhuseleko: Ukuba amaqondo obushushu / oxinzelelo lwesixhobo senzwa asisebenzi kakuhle, sibangela uxinzelelo ekwakheni ngaphaya kweseti ephezulu, i "Back-Up" iya "kuzikhaba" ngokuzenzekelayo kwaye ikhuphe uxinzelelo olwakhiweyo.
Uphawu "lweClog Resistant" Ukuthintela ukutya ekuthinteleni izibuko lokukhupha umphunga.
Ukukhutshwa kwengcinezelo yoKhuseleko: Ukuba zonke izinto ezikhuselekileyo zidweliswe apha ngasentla ziyasilela, esi sixhobo "silayishwe entwasahlobo" siphantsi kwento yokufudumeza iya kuthoba ngokuzenzekelayo iPot yangaphakathi, isenze ukuba sohlukane ngokuzenzekelayo kwiRubber Gasket. Oku kuyakwenza umphunga kunye noxinzelelo ukuba ubaleke ngokuzenzekelayo ujikeleze isitya sebhotile, uphephe imeko enobungozi.
Ubushushu "Bokusika" Isixhobo: Ukuba iyunithi ayisebenzi kwaye ibangele ubushushu bangaphakathi ukuba bunyuke bugqithe ngaphaya komda "okhuselekileyo", esi sixhobo siza kulusika unikezelo lombane kwaye asizukusetha ngokuzenzekelayo.
Ukupheka koXinzelelo lwaMandla XL AMACANDELO KUNYE NEZIXHOBO
KUBALULEKILE: I-Power Pressure Cooker XL TM yakho ithunyelwe kunye nezinto eziboniswe apha ngasentla. Jonga yonke into ngononophelo ngaphambi kokuyisebenzisa. Ukuba kukho naliphi na icandelo elilahlekileyo okanye elonakeleyo ungayisebenzisi le mveliso kwaye unxibelelane nabathumeli usebenzisa inombolo yabathengi ebekwe kwiphepha elingasemva lencwadana yomnini.
Imiyalelo ngokuSebenza ngokubanzi
PHAMBI KOKUSETYENZISWA KWOKUQALA
Ngaphambi kokusebenzisa i-Power Pressure Cooker XL okokuqala, hlamba i-Pot yangaphakathi, iLid kunye neRubber Gasket (eboniswe ngezantsi # 1) ngamanzi ashushu anesepha. Yipule ngamanzi acocekileyo kwaye wome kakuhle.
Ukuqinisekisa ulungiso olufanelekileyo lwebhola yerabha, gcwalisa imbiza yangaphakathi (eboniswe ngezantsi # 2) ngamanzi malunga ne-2/3 igcwele, beka isiciko kumpheki (kubonisiwe ngezantsi # 3), emva koko ujikeleze iValve yoxinzelelo kwindawo yokutshixa kwaye run kwimodi YOKUQINISEKISA imizuzu eli-10. Xa umjikelo ugqityiwe, usebenzisa i-tongs okanye esinye isixhobo sekhitshi, ujikeleze ngononophelo iValve yoXinzelelo kwindawo evulekileyo (Ikhethwe ngezantsi # 4) ivumela lonke uxinzelelo ukuba lubaleke. Vumela isixhobo ukuba sipholile kubushushu begumbi. Phalaza amanzi. Hlamba kunye netawuli yome Pot Yangaphakathi. I-Power Pressure Cooker XL ngoku ilungele ukusetyenziswa.
1. Isiciko (ngaphantsi) iRubber Gasket
Ukucoca ngokufanelekileyo iRubber Gasket kufuneka isuswe. Sebenzisa iThebhu yoTsalo ebekwe phantsi kwesiciko, susa i-Pot Lid Liner ephethe i-Gasket. Emva kokucoca, phinda uqhoboshele i-Gasket kwiLiner Liner kwaye uphinde ubuye endaweni.
2. Imbiza yangaphakathi
3. Ukubeka isiciko kumpheki
Beka imbiza yangaphakathi kwiyunithi. Ungaze ulayishe i-Pot yangaphakathi ngaphezulu komgca we-MAX. Jikelezisa imbiza yangaphakathi ukuze uqiniseke ukuba uhleli kakuhle.
Beka isiciko kwi-Cooker nge-Handle ne-Valve efihliweyo (Ikhiwane. A) yalatha kwindawo "ye-10: 00 yentsimbi". Jikelezisa i-Lid ngokungqinelana newashi de ube uziva unqakraza.
HOT LID isilumkiso: Sebenzisa isibambo esimnyama esidityanisiweyo kuphela xa uvula isiciko. Izinto zobusela ezingatshisiyo ziyatshisa kwaye zingatsha izandla zakho.
4. Uxinzelelo lweValve
ISILUMKISO: Kuphephe ukwenzakala okukhulu… Ungaze usebenzise isandla sakho ukuseta iValve yoXinzelelo kwindawo evulekileyo emva kwayo nayiphi na inkqubo yokupheka. Sebenzisa i-tongs okanye esinye isixhobo sekhitshi.
Umqokeleli weCensensation uqokelela ngokulula nakuphi na ukufuma okunokuvuza xa usebenzisa i-Power Pressure Cooker XL yakho. Lungelelanisa ngokulula kwaye utyhale umqokeleli kumajelo ngasemva kompheki. Yize kwaye ucoceke emva kokusetyenziswa ngakunye.
Ungaze ulayishe i-Pot yangaphakathi ngaphezulu komgca we-MAX. Jikelezisa imbiza yangaphakathi ukuze uqiniseke ukuba uhleli kakuhle kwiPleyiti yokuFudumeza.
Soloko uqinisekile ukuba iValve yoXinzelelo ayihambi ngokukhululekileyo kwaye icacile nakuphi na ukuthintelwa.
Qhoboshela intambo ye-AC kwisiseko seyunithi emva koko uyixhome intambo ye-AC kwindawo yokuphuma eludongeni eyi-120V.
Umphunga noxinzelelo kufuneka zikhutshwe ngokupheleleyo kwi-Cooker ngaphambi kokuba kuvulwe isiciko. Ukwenza oku, landela ngononophelo imiyalelo kwiphepha langaphambili.
UKUQELA: Ngexesha lale nkqubo khusela ulusu lwakho ngokuphepha nakuphi na ukudibana nokuphuma komphunga okanye isahlulo sensimbi esingenasici sePot Lid.
Cofa ezantsi ngesiciko uze ujike ngokwewotshi de uLid udibane nenkcaso… phakamisa ngononophelo ubeke ecaleni. Kunqande ukwenzakala kwakho ngenxa yeendawo ezishushu zeyunithi kunye nolwelo oluvuzayo.
Phawula: “Amaxesha okupheka” aboniswe kwincwadana yokupheka ayibandakanyi ixesha elongeziweyo elifunekayo ukunyanzelisa iyunithi ngaphambi kokupheka. Uxinzelelo olupheleleyo lunokuthatha ukuya kwimizuzu eli-17.
UKUCoca IINKONZO ZOKHUSELEKO: Ukongeza kwi-gasket, ezinye izixhobo zokhuseleko kwi-Power Pressure Cooker XL kufuneka nazo zicocwe emva kokusetyenziswa ngakunye.
Ingcinezelo Ingcinezelo: Ukususa iValve yoXinzelelo, tsala ngokulula kwaye ivelufa iya kukhulula kwindlela yayo yokutshixa kwentwasahlobo. Faka isicelo sesepha encinci kwaye uyihlambe phantsi kwamanzi ashushu afudumeleyo. Emva kokucoca, jonga ukuze ubone ukuba ingaphakathi elilayishwe entwasahlobo lihamba ngokukhululekileyo ngokucinezela phantsi. Beka iValve yoXinzelelo endaweni ngokuyityhalela ezantsi kumatshini olayishe intwasahlobo. Esi sixhobo sifuna ulondolozo oluncinci. Iqukethe iinxalenye zomsebenzisi onokuzisebenzisa. Ungazami ukuzilungisa ngokwakho. Nxibelelana nenkonzo yabathengi ngolwazi olulungileyo lokulungisa.
UKUCOCA: Emva kokusetyenziswa, vula iyunithi kwaye uvumele ukupholisa ngokupheleleyo ngaphambi kokucoca. I-Power Pressure Cooker XL kufuneka icocwe kakuhle emva kwento nganye eyenziwayo ukunqanda ukubola okubangelwa kukwakhiwa kokutya okanye intsalela yokupheka.
SUKUGALELA AMANZI AMANDLA KWI-HOT Power Pressure Cooker XL.
Phawula: Ukuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo kwale Power Pressure Cooker XL, landela ngokungqongqo imiyalelo yokucoca kunye neyokugcina emva kokusetyenziswa ngakunye, ukuba intwana yokutya (enjengokhozo lwerayisi okanye iqokobhe lepea) ihlala iyunithi, inokuthintela izixhobo zokhuseleko Ukusuka ekusebenzeni ngexesha lokusetyenziswa okulandelayo.
KUBALULEKILE: Soloko ususa iValve yoXinzelelo kwaye ucoce ukuvulwa ngepini ukususa nakuphi na ukubhloka okunokwenzeka ngexesha lokupheka. Oku kufuneka kwenziwe emva kokusetyenziswa ngakunye. Imbiza yokupheka ekhutshwayo kunye nesivalo azicwengeki ekucoceni. Yipule imbiza yokupheka kunye nesivalo phantsi kwamanzi ashushu abalekayo. Sebenzisa kuphela isepha yolwelo ethambileyo kunye nelaphu elithambileyo, isiponji okanye isikrufu senayiloni xa ucoca. Musa ukusebenzisa umgubo erhabaxa, bicarbonate yesoda okanye iblitshi. Sukusebenzisa iiphedi zokukroba.
WIPE BASE EMVA KOKUSETYENZISWA KONKE NGOBUQHAWU, INDAWO YOKUGQIBA OKANYE ISIPONSI, UKUQINISEKISA UKUBA YONKE INTLANGANISO YOKUTYA ISUSIWE.
SUKUGQIBELELA ESISISEKO EMANZINI
Xa kucocwa isiciko, iRubber Gasket (iphepha 4, Umzekeliso # 1) kufuneka isuswe kwaye ihlanjwe ngokwahlukeneyo ngesiponji okanye ilaphu elithambileyo kunye namanzi ashushu, anesepha.
Susa iplagi kwaye vumela iPower Pressure Cooker XL ipholile kwigumbi lobushushu ngaphambi kokucoca.
Hlamba imbiza enokufuduswa ngamanzi ashushu, anesepha kwaye ucoce ngelaphu elithambileyo okanye isiponji. Yipule ngamanzi acocekileyo kunye nethayile eyomileyo.
I-Rubber Gasket kufuneka ihlale ibekwe ngokufanelekileyo emazantsi esiCiko. Jonga amaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba icocekile, ibhetyebhetye kwaye ayikrazuki. Ukuba yonakele, musa ukuyisebenzisa le yunithi.
Sula isibuko esigqibileyo esingaphandle kweNdlu ngelaphu elithambileyo okanye isiponji (isicoci seglasi sinika izindlu ukukhanya okuqaqambileyo).
Ungaze usebenzise iisepha zekhemikhali ezirhabaxa, iipads okanye iipowder kuzo naziphi na izinto okanye izinto.
Ngalo lonke ixesha jonga ukuba iValve yoxinzelelo kunye neFlat Valve zikwimeko elungileyo yokusebenza kunye nenkunkuma simahla.
IPhaneli yolawulo lwedijithali
I-Power Pressure Cooker XL ineendlela ezisixhenxe zokupheka ezinokusetyenziswa zodwa okanye ngokudibeneyo ukuvelisa iziphumo ezingapheliyo.
XA IYUNITHI IQALISWA UKUQALA, 0000 izakuvela kuMboniso we-LED. Xa inkqubo yokupheka ikhethiwe, enje NGOKUQINISEKISA / UKUGCINA, ixesha elingagqibekanga liya kuboniswa imizuzwana emi-5 kwifestile ye-LED. Ke isiphumo esijikelezayo siya kuvela kwiscreen ukubonisa ukuba sakha uxinzelelo. Nje ukuba kwakhiwe uxinzelelo, umphumo wokujikeleza uya kuphela kwaye umboniso uza kuqala ukubala ixesha. Xa inkqubo igqityiwe, iyunithi iya kulila kwaye ingene kwimowudi ye-WARM efudumeleyo ide irhoxiswe.
IXESHA LOKUQOKA ISIKHUMBUZO SEXESHA: Xa inkqubo ethile yokupheka ikhethiweyo, iyunithi iya kubonisa ixesha elingagqibekanga kwifestile ye-LED kunye nesalathi "Ukutya: Ngokukhawuleza" ngezantsi kwefestile ye-LED. Ukuba iresiphi yakho okanye incasa yobuqu ifuna iziphumo "eziPhakathi" okanye "Kulungile", unokukhetha ezo ndlela ngokucofa iqhosha lokukhetha ixesha lokupheka. Ukongeza, iQhosha leSikhethi seXesha lokuSebenzisa linokusetyenziswa xa upheka iRayisi ukukhetha inkqubo efanelekileyo ye-White, Brown okanye ye-Wild.
PHAWULA: Ungaligqitha ixesha elilungiselelwe kwangaphambili ngokukhetha iqhosha loHlengahlengiso lweXesha.
KUBALULEKILE: Nawuphi na umsebenzi unokumiswa kwangoko ngokukhetha Cofa iqhosha.
Ukuba kukho umphunga ophuma emacaleni kwaye iValve yoXinzelelo ngaphezulu kwesiciko ikwindawo yokutshixa, ke Isiciko asihlali phantsi. Oku ngamanye amaxesha kuyenzeka xa iyunithi intsha. Ukuba i-gasket ikho endaweni yayo zama ukutyhalela ezantsi kwesiCiko. Oku kufuneka kutywinwe kwesiCiko kwaye umphunga kufuneka uyeke ukuphuma. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba iValve yeFlat idityaniswe ngokuchanekileyo. Indibano engachanekanga inokubangela ukuba umphunga uphume emacaleni okanye uthintele uxinzelelo ekwakheni. I-Valve yeFlat kufuneka ikwazi ukunyuka isenyuka ngokukhululekileyo kuphela xa i-silicon gasket idibana nesiciko. Kuqhelekile ukuba amafu avele kumqokeleli ongene. Jonga umzekeliso ongezantsi kwindibano.
1. Bamba intloko yeValve yeFlat kwaye ufake isiphelo esifakwe emngxunyeni weLid yeyunithi ngepensile okanye nasiphi na isixhobo esincinci. Tyhala kwaye ubambe intloko yeValve Valve ngokuqinileyo endaweni kwaye ubuyisele iLid kwicala elingaphantsi.
2. Isiphelo esinovulophu seValve yeFlat kufuneka siphume ngaphakathi ngaphakathi kwesiCiko.
3. Beka i-silicon gasket kwisiphelo esineflothi yeValve Valve ukuze ihlale kumjelo.
4. I-Valve yeFlat kufuneka ikwazi ukunyuka isenyuka ngokukhululekileyo kuphela xa i-silicon gasket idibana nesiciko.
PHAWULA: Zonke iindlela zokupheka zoxinzelelo zifuna ukongezwa kolwelo ngandlela thile
(amanzi, isitokhwe, njalo njalo). Ngaphandle kokuba uqhelene nenkqubo yokupheka,
Landela iiresiphi ngocoselelo ngeengcebiso zokongezwa kolwelo. Ungaze ugcwalise imbiza yangaphakathi ngasentla
Umgca we-MAX. Soloko usebenzisa iValve yoXinzelelo ukunciphisa uxinzelelo ngokukhawuleza.
NGABA I-Power Pressure Cooker XL IKHOLELE KUYO?
LUPHI UHLOBO LWENTSIMBI EYENZIWE LUYUNI?
UHLANGABEZANA NJANI / ULAWULA ISIHLOKO?
Jonga uMzobo kwiphepha lesi-3 lale ncwadana.
KUTHENI ISICWANGCISO SIYA KUVELA XA SINGafanele?
Kuya kuvela kuphela ukuba kwakungekho xinzelelo ngaphakathi.
LIYINTONI IXESHA ELIJONGILEYO?
Imowudi yokupheka nganye inexesha elingagqibekanga elibonakala ngokukhawuleza xa ukhetha loo mowudi yemowudi uyifunayo. Phambi kokuba iXesha lokuGqibezela "ukubala kwemizuzu" liqale, iyunithi kufuneka iqale ifikelele kuxinzelelo olufanelekileyo kunye / okanye kwiqondo lobushushu lolo hlobo.
KUTHABATHA IXESHA ELINGAKANANI UKUBA IYUNITHI IFIKELELE UXINEZELELO OLUPHELELEYO KUNYE NEXESHA LOKUPHEKA UKUQALA UKUQALA UKUBALA?
Ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-17.
NGABA UNOKUTSHINTSHA IXESHA LOKUPHEPHA UKUZE KUBE NGAPHEZU KOKUSETYENZISWA KWEZICELO?
Ewe! FUNDA ISANGQA KWIPHEPHA 7.
NGABA UNGAYISHIYA IYUNITHI XA UNGEKHO EKHAYA?
NGABA UNGAKUFAKA UKUTYA OKUQHELEKILEYO NGAPHANDLE KWOKUXHOSA?
Ewe khumbula ukongeza imizuzu eli-10 eyongezelelweyo
Isikhokelo soxinzelelo lweCanning
Ukutya okumnandi naninina…
Inkqubo yokunkonkxa iya kwenza ukuba ulungiselele kwaye ugcine zonke izinto ozithandayo zosapho kubandakanya iziqhamo ezisandul 'ukuphekwa, imifuno, inyama, ijam kunye neejeli. Ukunkonkxa yindlela entle yokuzisa ukutya “ngexesha lonyaka” kwitafile ngokwezoqoqosho. Ungathenga ngobuninzi ngoku ngamaxabiso asezantsi kwaye ugcine ixesha elizayo xa izinto zinqabile kwaye zibiza kakhulu.
PHAWULA: Kubalulekile ukuba usifunde esi sikhokelo ngononophelo ulandela onke amanyathelo okuqinisekisa ukuba ukutya kuye kwalungiswa ukuze kugcinwe ukutya okunesondlo kwaye kukhuselekile ukuba kungatyiwa lusapho lwakho. Ukunkonkxa okungalunganga kunokukhokelela kwiziphumo ezibi zempilo.
Inkqubo yoXinzelelo lweCanning ingasetyenziselwa konke ukutya kunye ngakumbi nalawo ane-asidi encinci. Oku kubandakanya imifuno, inyama kunye nokutya kwaselwandle.
Xa ukunkonkxa akukho gumbi lokulinga. Ukutshintsha ixesha lokupheka, izithako kunye namaqondo obushushu kunokuba yingozi kwaye kuyingozi. Ukusebenzisa ixesha elichanekileyo, ubushushu kunye nendlela echaziweyo kwiresiphi iya kukhusela ukutya kwiibhaktheriya eziyingozi, ukungunda kunye nee-enzymes. Ukongeza ixesha elininzi kwiresiphi kuya kutshabalalisa izakha-mzimba kunye nencasa.
Ii-enzymes zokutya zinokukhuthaza ukukhula komngundo kunye negwele, nto leyo eya kuthi ibangele ukonakala kokutya. Ezi arhente zinokutshatyalaliswa ngokufikelela kubushushu obungu-212 ° ngeendlela zokunkonkxa ngomphunga kodwa ke ezinye izinto ezingcolisayo zinokuphuhla njenge-salmonella, i-staphylococcus aureus, kunye ne-clostridium botulinum, unobangela we-botulism. Ukubulala ezi bhakteria kuyingozi kufuna iqondo lobushushu elingu-240 ° elinikezwe kuphela yinkqubo yoCinezelo loXinzelelo.
Umgangatho weasidi esezantsi ekutyeni, kokukhona unokukhula kwaye
ungcoliseko. Ukutya okuninzi okufana neziqhamo kuphezulu kwi-asidi apho okunye njengokutya, iimveliso zobisi kunye nokutya kwaselwandle kunamanqanaba asezantsi e-asidi. (jonga iitshathi ezingezantsi
Ukucinezelwa ngokuchanekileyo koxinzelelo kunciphisa ukubakho kokonakala kunye nongcoliseko.
Ukupakisha okrwada kunye nokuPakisha okuShushu
Ukutya okutsha kunomoya. Ubomi beshelf yokutya okunkonkxiweyo kuxhomekeke kubungakanani bomoya osusiweyo ngexesha lokunkonkxa. Umoya omninzi ususwe, ixesha elide lishelufu.
Ukupakisha okrwada yinkqubo yokunkonkxa ukutya okutsha kodwa okungafudunyezwanga. Inkqubo ibangela ukutya okunje ngeziqhamo ezisandula ukuntyiloza ezityeni zabo. Ukutya okuluhlaza okuphekiweyo kudla ngokulahla umbala ngokuhamba kwexesha. Ukupakisha okuluhlaza kunokuba kukhethwe kwezinye iiresiphi.
Ukupakisha okushushu yinkqubo yokutya okunkonkxiweyo okuphekwe kwangaphambili ngaphambi kokukupakisha ezityeni zabo. Oku kunciphisa umoya ekutyeni.
Nokuba kutheni Yendlela esetyenzisiweyo, lonke ulwelo olongezwe kukutya kufuneka luhlale lufudunyezwa kwindawo ebilayo. Oku kuyakususa umoya ogqithisileyo, kunciphise ukutya, kuthintele ukuntywila kunye nokwenza itywina eliqinileyo.
Ukuphakama kunye noxinzelelo lweCanning
Iqondo lobushushu apho amanzi aya kubila liyahluka ngokuxhomekeka kwindawo okuyo ngokubhekisele kwinqanaba lolwandle. I-Power Pressure Cooker XL iya kusebenza ngokufanelekileyo ukuya kuthi ga kubude obuphezulu be-2,000 ft ngaphezulu kwenqanaba lolwandle. Sukuyisebenzisa le yunithi ukunyanzela ukunkonkxa ngaphezulu kwe-2,000 ft.
Ukucwangcisa ixesha kunye noxinzelelo
Ishati engezantsi ibonisa ixesha elifanelekileyo lokuqhubekeka noxinzelelo lokutya okwahlukeneyo usebenzisa i-Power Pressure Cooker XL yakho. Iqhosha CANNING ubeka uxinzelelo. Ukuseta i-kPa engama-80 ilingana ne-11.6 lbs. PSI. Ukuya kuthi ga kwi-2,000 ft ngaphezulu kwenqanaba lolwandle, i-Power Pressure Cooker XL eneseto se-kPa 80 iya kuvelisa uxinzelelo olwaneleyo kunye nobushushu ukuze kuqhubekeke ngokukhuselekileyo konke ukutya okukhoyo.
Ngamaxesha okulungisa kunye neendlela zokutya ukutya okongezelekileyo kweasidi, nceda ujonge kwiZiko leLizwe lokuGcinwa kokutya kwasekhaya (http://www.uga.edu/nchfp/): okanye iarhente yolwandiso lwengingqi yakho.
Iingcebiso zokuKhusela ngokuKhuselekileyo
Sukusebenzisa iziqhamo ezivuthiweyo. Umgangatho ombi uhla ngokugcina.
Sukongeza ezinye izinto ezineeasidi ezisezantsi (amatswele, iseleri, ipepile, igalikhi) kunokuba kuchaziwe kwiresiphi. Oku kungakhokelela kwimveliso engakhuselekanga.
Musa ukuchitha ngaphezulu kwexesha kunye neziqholo. Izinongo zihlala ziphakamileyo kwiibhaktheriya ezenza iimpahla ezinamathanga zingakhuselekanga.
Ungafaki ibhotolo okanye inqatha. Amafutha awagcini kakuhle kwaye angalonyusa izinga lokonakala.
Thickeners - ungaze usebenzise umgubo, isitashi, ipasta, irayisi okanye irhasi. Sebenzisa kuphela i-USDA ekucetyiswa ukuba icace iJel ®.
YENZA i-asidi (incindi yelamuni, iviniga okanye i-citric acid) ngakumbi kwiimveliso zetumato xa usalathiswa kwiresiphi. Ukuba kukho imfuneko, unokulinganisela incasa yetart ngokongeza iswekile.
I-Power Pressure Cooker XL yakho yenzelwe ukulungiselela i-4 - 16 oz. (1 pint) iingqayi zomlomo ezibanzi ngeseshoni yokunkonkxa. Sicebisa ukuba usebenzise iingqayi ezineziciko zokuzitywina.
Ngalo lonke ixesha hlamba iingqayi ezingenanto emanzini ashushu ngesicoci ngesandla okanye kwindawo yokuhlamba izitya. Hlamba ngokucokisekileyo. Isikali okanye iifilimu zamanzi anzima ezityeni zisuswe ngokulula ngokufaka izimbiza iiyure ezininzi kwisisombululo esine-1 indebe yeviniga (iipesenti ezi-5 zeasidi) ngegaloni nganye yamanzi
Isiciko sokuzitywina (A) siqukethe isiciko sensimbi esicwecwe esigcinwe endaweni yokulungiswa yintsimbi yesikere (B). Xa iingqayi zilungiswa, isiciko segasket sithamba ukwenza uphawu olungena moya kunye nengqayi. Ukuqinisekisa ukuba itywina lilungile, landela ngononophelo izikhombisi zomvelisi xa ulungiselela iibhondi zokusetyenziswa. Vavanya zonke iziciko zesinyithi ngocoselelo.
Sukusebenzisa izivalo ezindala, ezifiliweyo okanye ezineziphene, okanye ezineziciko ezinezikhewu okanye ezinye iziphene kwindawo yokutywina.
Izixhobo ezongezelelweyo onokuzifuna
Inkqubo yoXinzelelo loXinzelelo lwaMandla
Ukuqala, khetha iresiphi esele ihlolwe kwangaphambili kwaye yamkelwe ukucinezelwa koxinzelelo.
Nangona izithako zahlukile, xa sithetha ngokubanzi uya kulungisa ukutya njengoko kubonisiwe kwesi sikhokelo
Khetha iresiphi yokucinezela yangaphambi kovavanyo. Ukukhetha kuphela izithako ezitsha, lungisa ukutya njengoko kuyalelwe. Imifuno kunye neziqhamo kufuneka zibe kwincopho yokuvuthwa okutsha okuvunyiweyo.
2. Gcwalisa i-16 oz. ukucoca izimbiza zokucoca kwinqanaba eliboniswe kwi-FIG. 1. Nawuphi na ulwelo akufuneki udlule kwinqanaba eliboniswe kwi-FIG. 1, ukuze kuhlala isithuba sentloko phezulu malunga ne-intshi enye.
3. Usebenzisa i-spatula eguqukayo engenantandabuzo cofa ngobunono phakathi kokutya kunye nengqayi ukususa nawaphi na amaqamza omoya abanjiweyo njengakwi-FIG.2.
4. Beka isiciko esicocekileyo ngaphezulu kwengqoko uze emva koko udibanise ibhanti yokujija. Jika ngokwewotshi kwaye uqinise endaweni endaweni kwi-FIG. 3.
PHAWULA: Ungaze uphinde ubeke iziciko emva kokuqhubekiswa kwejagi. Njengokuba iingqayi zipholile, imixholo ikhontrakthi, itsala isiciko sokuzibamba ngokuqinileyo ngokuchasene nengqayi ukuze yenze i-vacuum ephezulu.
Ukuba iibhanti zokujija zikhululeke kakhulu, ulwelo lunokubaleka kwiijagi ngexesha lokulungiswa, kwaye amatywina asilela.
Ukuba iibhanti zokujija zixinene kakhulu, umoya awunakuphuma ngexesha lokulungiswa, kunye nokutya kuya kuphuma umbala ngexesha lokugcina. Ukuqiniswa okungaphaya kunokubangela ukuba ii-lids zibambe kwaye iingqayi zaphule, ngakumbi ngokutya okuluhlaza, okucinezelweyo okutya. Iibhloko zokujija azifuneki kwiingqayi ezigciniweyo. Kuya kufuneka zisuswe emva kokuba iingqayi zipholile.
Xa isusiwe, ihlanjiwe, yomile kwaye igcinwe, izikrufu ezinokusetyenziswa zinokusetyenziswa amaxesha amaninzi. Ukuba zishiyiwe kwiijagi ezigciniweyo, ziye zibe nzima ukuzisusa, zihlala zinomhlwa, kwaye zinokungasebenzi kakuhle kwakhona.
5. Beka imbiza yangaphakathi kwiyunithi yesiseko. Emva koko faka iRack Rack emazantsi ePot yangaphakathi. Indawo ezalisiweyo, iiJars ezitywiniweyo kwiRack. Icandelo liya kubamba ukuya kwi-4-16 oz. Izimbiza (ubuninzi).
6. Thela amanzi ashushu ngaphezulu kwezimbiza nakwiPoti yangaphakathi de amanqanaba amanzi afikelele kwi-1/4 yendlela enyuka emacaleni eengqayi. Kwi-4-16 oz. iingqayi oku malunga neekomityi ezi-6 zamanzi. Xa kulungiswa iingqayi ezimbalwa, kuya kufuneka amanzi amaninzi.
7. Emva kokufunda iNcwadana yoMnini, beka isiciko esisezantsi ukhiye indawo yayo. Xhuma iyunithi kwindawo yokuphuma eludongeni.
8. Khetha i-Canning / Ukugcina iqhosha. Eli candelo liza kusilela kwinkqubo yokuKhonkxa ngokuzenzekelayo liseta uxinzelelo kwi-80 kPa. Ngoku uyakufuna ukuseta ixesha lokupheka ngokweresiphi yakho.
9. Xa inkqubo yokunkonkxa igqityiwe, khetha iqhosha lokuRhoxisa. Ukukhupha iyunithi kwaye usete iValve yoXinzelelo kwindawo evulekileyo. Nje ukuba wonke umphunga ubalekile, Susa ngononophelo isiciko.
10. Usebenzisa ii-Canning Tongs, susa iingqayi ezishushu uzibeke kwindawo enganyangekiyo bubushushu kwaye uvumele ukupholisa kubushushu begumbi.
11. Xa iingqayi zipholile, susa iiBrew Screw. Iziciko kufuneka zitywinwe ngokuqinileyo ezityeni kwaye xa zicinezelwe embindini akufuneki zibenaso nasiphi na isindululo "sokunika" okanye sokuphuma. Ukuba bayakwenza oko, awunakukugcina ngokukhuselekileyo oku kutya ukuze ukusebenzise kwixesha elizayo. Kufuneka iphinde yenziwe kwangoko okanye ifriji kwaye isetyenziswe kwiintsuku nje ezimbalwa.
12. Beka iingqayi ezigqityiweyo ezishelfini kwindawo epholileyo, ecocekileyo neyomileyo. Ukutya okwenziwe ngokufanelekileyo kuya kuhlala iinyanga namaxesha. Iingqayi, iziciko kunye neebhendi zokujija zinokuphinda zisebenze. Jonga konke ngononophelo phambi kokuba uphinde usetyenziswe.
KUBALULEKILE: I-Power Pressure Cooker XL xa isetyenziswa njengesixhobo sokufaka inkonkxa ayinakho ukusebenza okusebenzayo ngaphezulu kwe-2,000 ft ngaphezulu kwenqanaba lolwandle.
IsiQinisekiso seMveliso sikaMenzi
Umvelisi uqinisekisa ukuba iPower Pressure Cooker XL ™ yakho ayinaziphene kwimathiriyeli nakwimisebenzi kwaye, ngokuzikhethela kwayo, iya kulungisa okanye ibuyisele nasiphi na isiphene sePower Pressure Cooker XL ™ ebuyiselwe kuyo. Onke amacandelo kunye nezinto ezenziwa yiPower Pressure Cooker XL ™ ziqinisekisiwe iintsuku ezingama-60 ukusukela kumhla wokuqala wokuthenga. Le waranti isebenza kuphela ngokwemiqathango ebekwe apha ngezantsi:
Ukunxiba okuqhelekileyo kunye neenyembezi azigqutyuthelwanga yile waranti. Le waranti isebenza ekusetyenzisweni komthengi kuphela, kwaye ayisebenzi xa imveliso isetyenziselwa indawo yorhwebo okanye yeziko.
Iwaranti ifikelela kuphela kumthengi wokuqala kwaye ayidluliswanga. Ukongeza, ubungqina bokuthenga kufuneka bubonakalisiwe. Le waranti ayisebenzi ukuba imveliso ibephantsi kwengozi, ukusetyenziswa gwenxa, ukusetyenziswa gwenxa, ulondolozo olungalunganga okanye ukulungiswa, okanye ukuguqulwa okungagunyaziswanga.
Le waranti inomda kuphela ebhaliweyo okanye yokubonisa iwaranti enikwe ngumenzi. Naliphi na iwaranti echaziweyo yokurhweba okanye ukulungela injongo ethile kule mveliso inikwe umda kubude bexesha lesi siqinisekiso. Amanye amazwe akakuvumeli ukusikelwa umda kwithuba elingakanani eliwaranti lihlala khona, ngenxa yoko esi sithintelo singasasebenzi kuwe.
Ukulungiswa okanye ukutshintshwa kwemveliso (okanye, ukuba ukulungiswa okanye ukutshintshwa akunakwenzeka, ukubuyiselwa kwexabiso lokuthenga) sisisombululo esikhethekileyo somthengi phantsi kwesi siqinisekiso. Umvelisi akazukuba nabutyala ngokwaphula lo mthetho okanye nayiphi na iwaranti emiselweyo kule mveliso. Amanye amazwe akakuvumeli ukubekelwa ecaleni okanye ukuthintelwa komonakalo owenzekayo okanye kuwo wonke umonakalo, ngenxa yoko olu thintelo lungasentla alunakusebenza kuwe.
Le waranti ikunika amalungelo athile asemthethweni, kwaye unokuba nawo amanye amalungelo ahluka ngokwamazwe ngurhulumente.
Inkqubo yoLungiso lweWaranti okanye ukutshintshwa:
Ukuba inkonzo yewaranti iyimfuneko, umthengi wokuqala kufuneka apakishe imveliso ngokukhuselekileyo kwaye ayithumele iposi ihlawulwe ngenkcazo yesiphene, ubungqina bokuthenga, kunye netsheki okanye iodolo yemali eyi- $ 24.99 yokuhlawula ukubuyisa kunye nokuphatha kule dilesi ilandelayo:
Uxinzelelo Cooker XL ™, PO Box 3007, Wallingford, CT 06492.
Siyazingca kakhulu kuyilo kunye nomgangatho wethu
Le mveliso yenziwe kwimigangatho ephezulu. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, abasebenzi bethu abanobuhlobo banenkxaso yokunceda abathengi.
Incwadana yomsebenzisi womoya we-AirFryer XL Incwadana yamandla yomsebenzisi we-AirFryer XL ebalulekileyo: Iwaranti yamandla e-AirFryer XL TM ...
I-Crock Pot 8Qt Express Incwadana yomnini we-Crock XL ye-Multi-Cooker Incwadana yeCrock Pot 8Qt Express's Crock XL's Multi- Cooker's Owner's Manual ...
I-DUO NOVA I-Multi-Use Pressure Cooker yoMsebenzisi yokuSebenzisa DUOTM NOVA Multi-Use Pressure Cooker https://instantpot.com/portfolio_entries/duo-nova/ Isikhokelo sokuQalisa ...
I-Pot Instant DUO yokusetyenziswa kweNgcaciso yoPhuculo loMsebenzisi DUOTM Multi-Use Pressure Cooker Ukuqalisa Isikhokelo https://instantpot.com/portfolio-item/duo-6-quart/ Incwadi epheleleyo ...
Incwadana yemiyalelo yamandla e-XL yeGrill Air Fryer Combo Incwadana yemiyalelo yamandla e-XL yeGrill Air Fryer Combo -Lungiselelwe ...
I-Sage I-Pro Slow Pro ekhawulezayo ye-BPR700 ye-Cooker yoPhuculo loMsebenzisi I-Sage i-Pro Slow Pro ekhawulezayo ye-BPR700 ye-Cooker yoPhuculo loMsebenzisi ...
Oktobha 2, 2020 Oktobha 2, 2020 exhonyiweyoamandlatags: amandla, Uxinzelelo Cooker XL
Incwadana yomsebenzisi womoya we-AirFryer XL
laura labrake uthi:
Disemba 26, 2020 kwi-11: 51 pm
ndingu-5100 ngaphezulu kwentonga yolwandle
Ndingaqhubeka nangoku 4- 16 oz jars uf i jist ukwandisa ixesha? imvana umzekelo ithi i-10 st 75 okanye useto oluphakathi. Ndingayibeka kwindawo yesi-3 okanye yokuma kakuhle kwinqanaba lethu lolwandle
Ndiyifumene le yokunkonkxa kwaye ngoku ithi andikwazi ngaphezulu kweenyawo ezingama-2000 ngaphezulu komgangatho wolwandle!
UDavid Mendoza uthi:
January 8, 2021 apha 1: 46 pm
Umkhono wesinyithi obambelela kwisiciko sangaphakathi ungene kwi-ppc 770 yam. Isiciko asitywini ngokufanelekileyo ngamanye amaxesha kwaye sihamba xa sitshixwa.
UNorman Wesley Bowden uthi:
Matshi 29, 2021 kwi-11: 27 pm
Ndingayi-odola le manuel yomsebenzisi kwi-Power Pressure Cooker XL yam?
Matshi 30, 2021 kwi-5: 38 am
Khuphela uze uprinte: https://manuals.plus/wp-content/uploads/2020/10/Power-Pressure-Cooker-XL-Manual.pdf
UZoila Hernandez uthi:
April 26, 2021 kwi 5: 52 am
Ungayicoca njani i-casserole, xa ukutya kuye kwabambelela kuyo.
Enkosi, ndilinde impendulo yakho. Zoila
UJulie Gutierrez uthi:
Meyi 6, 2021 kwi-9: 13 pm
Ndifuna ukwazi ukubonwa kwamanzi nge-6 kumbane xl wokupheka.
Meyi 6, 2021 kwi-9: 21 pm
Inokuxhomekeka kwinombolo yemodeli yakho, jonga kolu luhlu: https://manuals.plus/power/power-pressure-cooker-xl-user-manual/attachment/unit-specifications
UMartha Garcia uthi:
Meyi 15, 2021 kwi-2: 54
Ubusuku obuhle, imbiza yam ye-xl iyajika kodwa akukho msebenzi wenziweyo, ndingenza ntoni
I-Buenas noches, mi olla xl prende pero no se activa ninguna función, que puedo hacer
Meyi 18, 2021 kwi-4: 45 pm
Ndiwafumana phi amaxesha okupheka? Andizifumani naphi na!
Ngaba i-Donde encuentro los tiempos de coccion ?? Akukho los encuentro por ningun lado!
UDiane Parker uthi:
Meyi 23, 2021 kwi-12: 04
Ngapha koko ukuthulisa isililo? Yenza inja yam iphazamisane novalo ‍♀️
Zivka nikolic uthi:
Juni 6, 2021 kwi-9: 21 pm
Ndithenge esi sitovu sombane, siyimbiza, okokuqala sasiphezulu, ngoku asitshisi iitephu ngokubanzi, yonke into ichanekile, ayishushu kwakhona, ndingenza ntoni?
Julayi 24, 2021 kwi-2: 03 pm
Ndingayikhuphela incwadi yoxinzelelo yokupheka kunye nencwadi yamandla enkonkxi? Bendinazo kodwa ndilahlekile… zilungile iinguqulelo zesingesi.
UCandi Biever uthi:
Julayi 26, 2021 kwi-6: 19 pm
Molo, ndifuna ukupheka, andikwazi, imifuno eshinyeneyo, njengeebhatata, iibhotile, iminqathe. Ndifuna ukubapheka bade bathambe, kodwa hayi mush. Sifuna ukuzitya zithambile, okanye singenzi enye into ngazo. Kwincwadana yemigaqo, kwitshathi ibonisa iitapile kunye neebhitet, kodwa akukho sicwangciso semifuno. Ndenze okuthile kuseto lweentlanzi, kodwa kuye kwafuneka ndiyenze kabini. Ngekomityi yamanzi emazantsi kunye nomtya wocingo.
Agasti 9, 2021 kwi 10: 34 pm
Ixesha lam alizukutshintsha, kufuneka ndilinde uxinzelelo ukwakha kuqala. Ukungagqibeki yimizuzu elishumi. Ndidinga ama-20. Ngaba iqhosha lelayisi likwixesha lokupheka?
Agasti 25, 2021 kwi 8: 30 pm
Ungayitshintsha njani i-cuvette iyasuswa. Andisakwazi ukuyisebenzisa.
I-remplacer ye-cuvette elle est déculase.Je ne peux kunye ne-serv ye-serv.
UKathy Johnson uthi:
Agasti 30, 2021 kwi-2: 45 am
Molo ndithenge i-xl ngo-2017. Ndigule kakhulu. Ndishukunyisiwe kwaye ngoku ndifuna ukusebenzisa i-canner kodwa ndayibeka endaweni engeyiyo incwadi yokunkonkxa. Ndiyifumana njani enye?
Agasti 30, 2021 kwi 5: 35 pm
Septemba 7, 2021 kwi 7: 06 am
Molo, imbiza yam iyajika xa ndiyidibanisa nale yangoku, kodwa ayitshisi kwaye ndibuhlungu kakhulu, bendicebe nokuthenga enye, kodwa ayikapheli iminyaka emibini kwaye ayisasebenzi!
Indlela endibuhlungu ngayo indenza buhlungu, bendingakhathali nokuba ingaphakathi liphulukene nombala omnyama, mhlawumbi besikutyile kunye nokutya kwethu, kodwa zonke bezimnandi kakhulu.
Nceda uncede !!! Ndingenza ntoni ukumfudumeza kwakhona?
Kwaye ngaba bahlala ixesha elincinci kangaka? Ngaba oku kuye kwenzeka nakubani na? Uneminyaka eli-1/1 kuphela ubudala, akasekho kwaye sele eqhekekile
Que tristeza me da, no me importaba que la parte interior había perdido el color negro, quizás nos lo comimos con las comidas, pero estaban muy sabrosas todas.
Por ubabalo, ayuda !!! I-Que puedo hacerle para que caliente otra vez?
Uhlala uhleli njani? Le ha pasado ésto a alguien? Sólo tiene 1 1/2 año, akukho más y ya se rompió
I-Saramonic Blink500 Pro Ultracompact 2.4 GHz Incwadana yomsebenzisi womnxeba ongenantambo ye-Dual-Channel
I-TAOTRONICS TT-SK018 Isikhokelo soMsebenzisi weSandi esisiSandi esincinci
ANKER A2561 PowerWave Magnetic 2-in-1 Yima isikhokelo somsebenzisi
I-Honeywell Ekhaya C7189R1004 Incwadana yokuFundisa i-Wireless Indoor
RYCO RCA329M Cabin Air Icebo lokucoca ulwalathiso N99 MicroShield Imiyalelo